အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပါတီပွဲအတွင်း ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာလူ ၃ ဦးသေဆုံး ၊ အများအပြားဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၌ ဇွန် ၆ ရက်က ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေရာအနီးတစ်ဝိုက်လမ်းများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ပိတ်ဆို့ထားစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
ဝါရှင်တန် ၊ ဇွန် ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် Miami-Dade မြို့ငယ်လေး၌ ဇွန် ၆ ရက်က ဘွဲ့နှင်းသဘင် ပါတီပွဲ အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၃ ဦးသေဆုံးပြီး အခြား အများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း မီယာမီ WPLG ကို ကိုးကား၍ ABC သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုသည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၂ နာရီခန့်တွင် Kendall မြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပါတီပွဲကျင်းပရာ စားသောက်ဆိုင် သီးသန့်ခန်းတည်ရှိသည့် ဈေဝယ်စင်တာတစ်ခုထဲသို့ ကားနှစ်စီး ဝင်ရောက်လာပြီး သေနတ်ဖြင့် ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Miami-Dade ရဲတပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Freddy Ramirez က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပါတီပွဲကျင်းပနေသည့် စားသောက်ဆိုင်ခန်းထဲရှိ လူများကို ချိန်ရွယ်၍ ကားတစ်စီးပေါ်မှ သေနတ်သမားတစ်ဦးက ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦး နှင့် အမျိုးသားနှစ်ဦး အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အခြား အမျိုးသားသုံးဦး နှင့် အမျိုးသမီးသုံးဦး အပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ ၆ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့သည် ဆေးများ၌ တည်ငြိမ်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း အာဏာပိုင်များ၏ ပြောကြားချက် အရသိရသည်။
သေနတ်ပစ်ခတ်ခံရပြီး ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးသွားသူနှစ်ဦးအား သယ်ဆောင်လာသည့် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးသည် Miami Dade ကောလိပ် Kendall ကျောင်းပရဝဏ်အုတ်နံရံကို ဝင်တိုက်မိခဲ့ကြောင်း WPLG ရုပ်သံလွှင့်ချန်နယ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ သေနတ်တစ်လက်ကို ကားတစ်စီးထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သို့သော် ယင်းသေနတ်သည် ပစ်ခတ်ချိန်တွင် အသုံးပြုခဲ့သော သေနတ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုမူအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားမရှိသေးပါ။ “ ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်တံ့ရပါမယ် ၊ ဒါဟာတကယ့်ကို စိတ်ခြောက်ခြားစရာပါ ၊ ဖြစ်ပျက်နေပုံတွေက အပတ်တိုင်း အပတ်တိုင်း တူတူပဲဖြစ်နေတယ်” ဟု Ramirez က ဆိုသည်။ “ ဒီလို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အသိဉာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ ဗရမ်းပတာပစ်ခတ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ သေနတ်ထိမှန်နေရသလို သေဆုံးသူတွေနဲ့ ကျန်ရစ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်နေရတာပေါ့” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုပစ်ခတ်မှုသည် Kendall မြို့မှ မြောက်ဘက် ၁၇ မိုင်ခန့်အကွာ Miami-Dade မြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြားသော မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hialeah မြို့ရှိ ဧည့်ခံပွဲခန်းမ တစ်ခု၏ အပြင်ဘက်တွင် လူသုံးဦး သေဆုံးပြီး ၂၀ ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သည့် အစုပြုံလိုက် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အကြာတွင် ထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်လိုက်သော ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွင် မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသော သေနတ်သမားသုံးဦးသည် ခိုးယူလာသည့် SUV ကားတစ်စီးပေါ်မှ ခုန်ဆင်းကာ နယ်ခံ ရပ်ဒ်(Rap) အဆိုတော်တစ်ဦး၏ မွေးနေ့ပွဲကျင်းပနေသည့် စားသောက်ပွဲခန်းမထဲသို့ ဝင်ရောက်၍ လူများအား တရပ်စပ် ပစ်ခတ်ခဲ့ပုံများကို ရိုက်ကူးထားသည်။ အဆိုပါသေနတ်သမားများသည် ယခုအချိန်ထိ လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, June6(Xinhua) — At least three people were killed and multiple others injured on Sunday inagraduation party shooting in Miami-Dade County, southeastern U.S. state Florida, ABC News Miami affiliate WPLG reported.
Police releasedasecurity video showingastolen SUV pull up to the banquet hall and three gunmen, wearing masks, jump out of the vehicle and open fire on victims leavingaconcert celebratingalocal rapper’s birthday. The gunmen are still at large. Enditem
PHOTO – POLICE BLOCK AN INTERSECTION NEAR THE MIAMI-DADE KENDALL CAMPUS IN MAIMI, FLA., ON JUNE6, 2021.